Galmudug oo Qorshaynaysa Daahfurka Wajiga 3aad ee Talaalka COVID-19 | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Galmudug oo Qorshaynaysa Daahfurka Wajiga 3aad ee Talaalka COVID-19
MUQDISHO (SONNA)- Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo kaashaneysa Hay’adda IRC ayaa Magaalada Dhuusamareeb ku qabatay Madal Dood ah oo looga hadlayay Daah-furka wajiga Sedexaad ee qaadashada Talaalka COVID-19 si looga hortago qatarta uu kula soo laaban karo Bulshada Soomaaliyeed kaasoo Saameyn taban ku yeeshay Dalka.
Si looga hortago dhibaatada ka imaan karta Cudurkan ayaa ka qeyb galayaasha kulanka loogu iftiimiyay qaabka ay u qaadan karaan Talaalkan oo horey loo bixiyay wajigiisa koowaad iyo Labaad.
Waxaa sidoo kale kulanka ka qeyb galay Mas’uuliyiin uu kamid yahay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dr Cabdiwali Axmed Maxamuud iyo Guddoomiye ku-xigeenka Maamulka Dhusamareeb Cabdi Xaashi Caroole, Ururada dhalinyarada iyo Marti sharaf kale.
Qaar kamid ah Dadka ka qeybgalay Madasha ayaa Su’aalo ku saabsan isticmaalka talaalka ubandhigay Qubaro Caafimaad oo ka socday Wasaaradda Caafimaadka Galmudug.
Guddoomiye ku-xigeenka Maamulka Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Caroole oo ka hadlay kulanka ayaa Bulshada u sheegay in ay qaataan Talaalka si looga hortago halista Cudurka COVID-19.
Ugu dambeyn Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr Cabdiwali Axmed Maxamuud ayaa sheegay in mar kasta oo la qaato Talaalka uusan wax dhib ah ku yeelan doonin Cidkasta oo qaadata dhawaana uu bilaaban doono wajiga Sedexaad ee talaalka COVID19.
Previous articleWasiirka Wasaaradda Gargaarka Jubbaland oo magacaabay guddiga diyaar garowga iyo ka jawaabista Aafooyinka
Next articleWasiiro ka tirsan Dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo soo gaaray degmada Xuddur
Xuska munaasabadda maalmaha xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da Luulyo oo dal...